मोदि पथमा ओलि: 'नेपाली राम' र 'भारतिय बुद्ध'को प्रशंग
मोदि पथमा ओलि: ‘नेपाली राम’ र ‘भारतिय बुद्ध’को प्रशंग
सन २०१९ अर्थात करिब एक साल अघि भारतमा निर्वाचनको गर्मी सुरु हुदै गर्दा काश्मिरमा भएको भिडन्तमा केहि भारतिय फौजको मृत्यु भएको समाचार बाहिरियो।
मोदि प्रशासनद्वारा पालित भारतिय समाचार च्यानलहरुले धमाका मच्याउन सुरु गरे। ‘चुनाबमा बिजेपिलाइ हराउन र कांग्रेसलाइ जिताउनकै लागी चुनाबको मुखैमा भारतिय फौजमाथि पाकिस्तानले हमला गर्दैछ’ भनेर ब्यापक हल्ला फैलाइयो। ‘मोदि सरकारले मात्र पाकिस्तान र चिनलाइ तह लगाउन र भारतलाइ बिश्व शक्तिशाली बनाउन सक्ने हुनाले चिनको सहयोगमा पाकिस्तानले हमला गरेको’ भनेर प्रमाणित गर्न पुरै तागत लागाइयो।
यद्यपी केहि समय पश्चात उक्त हमला पाकिस्तानले नगरेको र उक्त घटनामा बिजेपीका मान्छेहरु संलग्न भएको तथ्य सेनाले प्रमाणित गर्यो र उनिहरुलाइ जेल हालियो। तर, त्यतिन्जेल चुनाव भइसकेको थियो र बिजेपिले बहुमत प्राप्त गरिसकेको थियो। मोदि दोस्रो कार्यकालका लागी प्रधानमन्त्री हुने निश्चित थियो।
महाकाली भारतलाइ बेचेर काठमाडौमा महल बनाएका ओलि नालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाइ काश्मिर बनाउन चाहान्छन। चुनाबको मुखमा जसरी मोदिले गुण्डा लगाएर आफ्नै आर्मी मारेर राष्ट्र बचाउनको लागी भोट माग्छन र चुनाब जित्छन नेपालमा त्यसै गर्ने दाउमा ओलि छन।
यसै घटनाबाट थाहा हुन्छ- शासकहरु सत्ताप्राप्तिका लागी कसरी आफ्नै सेनालाइ आफु संरक्षित गुण्डा लगाएर हत्या गर्छन र आफुलाइ राष्ट्रबादी कहलाउछन। हुन त बिस्वराजनितिमै यसप्रकारका तिक्डम नयाँ होइनन तर मुलतः साउथ एसियन राजनिति र विशेष गरि भारतिय शासक यो तिक्डमको सफल र सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्नेमा पर्दछन।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा काश्मिर बन्ने खतरा
नयाँ नक्सा जारी गरेपश्चात नेपालले भारतसंग बार्ताको पहल गर्नुपर्थ्यो। र, मुलतः प्रधानमन्त्रीले नै यसको पहल गर्नुपर्थ्यो तर उनले त्यसो गरेनन। बरु कहिले भारतिय कोरोना र चाइनिज कोरोनाको कुरा गरे त कहिले भारतले आफुलाइ हटाउन लागेको भाषण गर्दै दिनचर्या बिताउन थाले। र, भारतलाइ बार्ताबाट भड्काए।
ओलि-मोदि नेपालको जनकपुरमा
कतिपयलाइ लाग्ला- हामिले मात्र किन पहल गर्ने? बार्ताको लागी भारतले पनि त पहल गर्नुपर्यो। तर त्यसो होइन, हामिले नै बार्ताको पहल किन गर्नुपर्छ किन कि हाम्रो भुमि भारतको कब्जामा छ। जब हाम्रो भुमिमा उस्को कब्जा छ भने भारत हामिसंग बार्ता गर्न किन चाहन्छ? ऊ त बार्ताबाट भागिरहन चाहान्छ। जसलाइ ओलिका बोलि र व्यबहारले साथ दिइरहेकोछ। र, भारतलाइ बार्ताबाट ओलिले नै भड्काइरहेका छन।
महाकाली भारतलाइ बेचेर काठमाडौमा महल बनाएका ओलि नालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाइ काश्मिर बनाउन चाहान्छन। चुनाबको मुखमा जसरी मोदिले गुण्डा लगाएर आफ्नै आर्मी मारेर राष्ट्र बचाउनको लागी भोट माग्छन र चुनाब जित्छन त्यसै गर्ने दाउमा ओलि छन।
नेपाली राम, भारतिय बुद्द र ओलि-मोदि सम्बन्ध
झुटलाइ पनि हजारौं पटक दोहोर्यायो भने मान्छेलाइ त्यो झुट पनि सत्य झै लाग्न थाल्छ भन्ने जर्मन शासक हिटलरका प्रोपोगन्डा मन्त्री पल जोसेफ गोबेल्स (Paul Joseph Goebbels) को प्रचारनितिको अनुयायी भारतले बुद्द भारतिय भएको झुट हिजो देखी आज सम्म बोल्दै आएकोछ। र, आफ्ना पाठ्यपुस्तक मै लुम्बिनी भारतमा रहेको पढाउदै आएको भारतले जसरी आफ्ना जनता र दुनियाँलाइ बेबकुफ बनाउदै आएकोछ। त्यसैगरी, राम नेपाली भएको र अयोध्या नेपालमै रहेको बताएर ओलिले आफु भारतिय शासकको ठुलै फ्यान भएको प्रमाणित गरेका छन।
ओलिले सन २०१८ मे ११ मा मोदिलाइ जनकपुर बोलाएर ‘अस्वभाविक’ नागरिक अभिनन्दन गरे र जानकी मन्दिरको सांचो समेत हस्तान्तरण गरे। त्यतिन्जेल सम्म ओलिको सक्कली अयोध्या भारतमै थियो। आज एकाएक कसरी अयोध्या नेपालमा सर्यो? मोदि आउदा सार्बजनिक बिदा समेत दिएर देशकै बेइज्जत गर्ने शासकलाइ कसरी आज एकाएक बिरगंजको पश्चिम पट्टी रहेको अध्यारो पारिएको अयोध्या गाउँको याद आयो?
“राजनितिमा जे देखिन्छ त्यो हुदैन। र, जे बाहिर देखिएको हुदैन, त्यो भएरै छाड्छ।” यो कुरालाइ मान्ने हो भने अहिले पनि ओलि-मोदिको ब्यक्तिगत सम्बन्ध त्यति नराम्रो छैन। कहिले ७० करोडवाला आफ्ना पुर्बमन्त्रीलाइ दूतावास पठाएर त कहिले भाजपा नेता बिजय जोलिमार्फत होस। अहिले पनि ओलि मोदिको सम्पर्कमै छन।
उल्लेखित ओलिका बेतुकका कुरासंग देश र जनताको केहि लिनुदिनु छैन। यि त आफ्नो सत्ता संकटमा पर्ने देखेपछी बड्बडाउने ओलि र मोदि २ भाइका कुरा हुन। १७ सेम्टेम्बर १९५० भारतको वड़नगर, गुजरातमा जन्मिएका ७० बर्षिय मोदि र जन्म २२ फ़रवरी १९५२ मा नेपालको तेर्हथुम जिल्लामा जन्मिएका ६८ बर्षिय ओलि फरक-फरक आमा-बाबुबाट जन्मेका ‘सहोदर’ दुइभाइ हुन भन्दा फरक पर्दैन। भाइले कहिले दाइलाइ सांचो बुझाएर सम्मान गर्छ त कहिले घुर्क्याए जस्तै गरेर माया गर्छ।
ओलि नै भारतको रोजाइ
भनिन्छ- “राजनितिमा जे देखिन्छ त्यो हुदैन। र, जे बाहिर देखिएको हुदैन, त्यो भएरै छाड्छ।” यो कुरालाइ मान्ने हो भने अहिले पनि ओलि-मोदिको ब्यक्तिगत सम्बन्ध त्यति नराम्रो छैन। कहिले ७० करोडवाला आफ्ना पुर्बमन्त्रीलाइ दूतावास पठाएर त कहिले भाजपा नेता बिजय जोलिमार्फत होस। अहिले पनि ओलि मोदिको सम्पर्कमै छन।
ओलिलाइ सत्तामा टिकाइरहने एउटै शुत्र हो- भारतिय मिडियामा उनलाइ गाली गर्ने। ताकी नेपाली जनतालाइ लागिरहोस कि ओलिलाइ भारतले हटाउन चाहान्छ।
भारतलाइ यो राम्रोसंग थाहा छ कि जबसम्म ओलि जस्ता मुर्खहरु नेपालको सत्तामा रहन्छन तबसम्म भारतिय र चाइनिज कोरोना प्रसंग अनि अयोध्या र लिम्पियाधुराको दाबी ‘उस्तै’ देखाएर भारतले नेपाललाइ तल पारिरहन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बोलिलाइ महत्वहिन बनाउन उसलाइ सजिलो हुन्छ।
कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री ब्यक्ति हुदैन ऊ सिंगो देश हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको बोलि देशको बोलि मानिन्छ। तर ओलिको चोथारे बोलिले नेपाल जे पनि बोल्छ र जे पनि गर्छ भन्ने छाप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यो भने त्यसले देशलाइ धेरै पछि सम्म अफ्ट्यारो पर्दछ। त्यसैले भारत ओलिलाइ सत्तामा टिकाइराख्न चाहान्छ। नेपाली जनतामा भारत बिरोधी मनोभावना बढ्दै गएको राम्रो संग बुझेको भारतको ओलिलाइ सत्तामा टिकाइरहने एउटै शुत्र हो- भारतिय मिडियामा उनलाइ गाली गर्ने। ताकी नेपाली जनतालाइ लागिरहोस कि ओलिलाइ भारतले हटाउन चाहान्छ।
ट्यागहरू: #ओलि#नेपाल#बिष्णु पोखरेल#भारत#मोदि#राजनिती#सेतोमसी
नेपाली बैज्ञानिक महाबिर पुनले अमेरिकी बिश्वबिद्धालयसंगको सहकार्यमा नेपालमै भेन्टिलेटर उत्पादन गर्दै
नेपालीलाइ हाच्छ्युँ गरेर कोरोना भगाउंँ भन्ने ओलिद्वारा अमिताभ बच्चनको स्वास्थलाभको कामना